အင်တာဗျူးသွားကြမယ် (၃) – အင်တာဗျူးတွင် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန် အပြုအမူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အင်တာဗျူးသွားကြမယ် (၃) – အင်တာဗျူးတွင် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန် အပြုအမူများ
Posted by ဇီဇီ on Mar 28, 2013 in Copy/Paste, Facebook, Interviews & Profiles, Jobs & Careers, Society & Lifestyle | 12 comments
အင်တာဗျူး (၁) က http://myanmargazette.net/168825
အင်တာဗျူး (၂) က http://myanmargazette.net/171251
အင်တာဗျူး (၄) က http://myanmargazette.net/171299
အင်တာဗျူး သွားကြမယ် (၁)/(၂) ပြီးတော့ ကျန်နေတဲ့ အပိုင်းလေးတွေ ဘာသာပြန်ဖို့ ပျင်းနေရာက ဖဘလေး ဝင်…ဟိုကြည့်ဒီကြည့်အကျိုးအကျေးဇူးနဲ့ “ရေးမိရေးရာ ကလေးများ” က ရှယ်ထားတဲ့ လင့်(ခ) လေးသွားတွေ့တယ်။။
ကိုယ်ပြောလည်းပြောချင်ပြီး မရေးနိုင်လို့ အချိန်ဆွဲနေတဲ့ အချက်တွေ အတော်များများကြီးကို စေတနာထားရေးထားတာတွေ့လို့ နည်းနည်း မွန်းမံပြီး ပြန်တင်လိုက်တယ်။
သူရေးတာကို ဘာမှ မဖြုတ်ပဲတင်တာမို့ အရင်က ဘာသာပြန်ထားတဲ့ အထဲက တူတာတွေ ပြန်ပါနေပါတယ်။
၂ ထပ်ရှိတော့ မှတ်မိတာပေါ့နော့။
နောက်တစ်ခု ဆိုရင်တော့ စီဗီနဲ့ Cover Letter ရေးတာပဲ ပြောဖို့လိုတော့မယ်ထင်တယ်။
အဲ။ တယ်လီဖုန်း အင်တာဗျူးအကြောင်းလည်း ရေးနိုင်ရင် တင်ပေးပါ့မယ်။
အင်တာဗျူးလုပ်သည့်အခါ ကြုံရတတ်သော လှည့်ထားသည့် အမေးများကို ပြင်ဆင်ရာတွင်
အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော မိမိ၏အရည်အချင်းများနှင့် ပညာရေးအကြောင်းများ၊ အတွေ့အကြုံများကို ပြောပြပါ။
အားလုံးသည် လျှောက်ထားသောအလုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရာများဖြစ်စေရမည်။
မည်သည့် အခါမျှ မိမိနောက်ကြောင်း ပြန်မပြောနေရပေ။ မိမိအား ဘဝပုံပြင်ပြောရန် ခေါ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဒီအလုပ်အကြောင်း မကောင်းတာကြားထားတာ တခုခုလောက် ပြောပါလားဆိုရင်_
မိမိကြားထားသော အတင်းအဖျင်းများကို ပြန်မပြောရပေ။
ထိုအကြောင်းများကိုမပြောပဲ မကောင်းတဲ့ အလုပ်မှာ မိမိ ဘယ်လျှောက်မှာလဲ
ဆိုသည့် အဖြေမျိုးနှင့် ဝိပါတ်လွတ် ဖြေကြားသင့်သည်။
ဘာ့ကြောင့် မင်းကို ဒီအလုပ် ခန့်သင့်တယ် ထင်လဲဆိုတာမေးရင်_
ဒီအလုပ်အကြောင်း သိထားတာတွေထဲက ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ ကိုက်ညီပြီး ကိုယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တာတွေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး ဒီအလုပ်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ထင်တယ် ဆိုတာမျိုးနဲ့ အဖြေပေးပါ။
ကျွန်တော်ဟာ အရမ်းကိုတော်နေတော့ ဒီအလုပ်အတွက် ကျွန်တော့ထက်ပိုပြီး ထိုက်တန်တဲ့လူ မရှိပါဘူးဆိုပြီးများ ဘယ်တော့မှ သွားမပြောပါနဲ့။
ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေဟာ ဒီအလုပ်မှာ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ဘယ်လို ကိုက်ညီတာကိုပဲ ဦးစားပေး ပြောဆို ဆွေးနွေးပါ။
နောက်ငါးနှစ်၊ ဆယ်နှစ်အကြာမှာ မင်းဘာဖြစ်နေမယ်လို့ ထင်လဲလို့မေးရင်_
မသိဘူးလေ။ ဘဝဆိုတာမသေချာဘူး။ ဘာဖြစ်မလဲ ကြိုပြောလို့ ဘယ်ရမလဲ ဆိုတာမျိုးကို သွားမပြောပါနဲ့။
ဒီလာမယ့် ငါးနှစ်မှာ အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေရယ်၊ သင်တန်းတွေရယ်၊ သင့်အရည်အချင်းတွေရယ်၊ သင့်ကြိုးစားမှုတွေရယ်နဲ့ သင့်ရဲ့ အောင်မြင်အောင် လုပ်တတ်တာတွေရယ်ဟာ ဒီလုပ်ငန်းမှာ ပိုကောင်းသထက်ကောင်းတာ၊ ပိုအံဝင်သထက် အံဝင်တာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို မြင်မိတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
တကယ့်လက်တွေ့ဘဝသိပ်ဆန်လို့ မရပါဘူး။ ဒီလုပ်ငန်းကို ပိုတိုးတက်အောင် လုပ်မယ့်သူ၊ ဒီအလုပ်နဲ့ မြဲမယ့်သူကို သူတို့ ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။
အင်တာဗျူးမှာ မင်းဖြေတာ တော်တော်ဆိုးတယ်လို့ ငါပြောရင် မင်းဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲလို့မေးရင်_
တခါထဲ ကြောက်လန့် တုန်လှုပ်သွားတာ မဖြစ်ပါနဲ့။
သူပြောတာက တကယ်လို့ လို့ ပြောတာဆိုတော့ တကယ်ဖြစ်နေတာ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မှာပါ။ ဒါမျိုးပြောတာက တကယ်အရေးအကြောင်းမှာ မထင်ထားတာပြောခံရရင် ဘယ်လို ထိမ်းမနိုင် ဖြစ်မလဲကို စမ်းသပ် မေးတာမျိုးဆိုတာကို သဘောပေါက်ပါ။
ပြုံးပြီး ကျွန်တော်တော့ ကြိုးစားတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်း အင်တာဗျူးတွေက လူတွေကို လန့်စေတတ်တယ်မဟုတ်လား ဆိုတာမျိုး ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမျိုးမှာ အားနည်းသွားတာရှိလဲ အသိပေးနိုင်ရင် အသိပေးစေချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကို နောက်အဲ့ဒီ အားနည်းချက်မျိုး မဖြစ်အောင် ပြုပြင်နိုင်မှာ မို့လို့ပါလို့ သူ့ကို စိတ်အရမ်း မလှုပ်ရှားတဲ့ ပုံစံနဲ့ တုံ့ပြန်ပြီး သူပြောတာကို ကောင်းကောင်းမှတ်သားတဲ့ ပုံစံနဲ့ တုန့်ပြန်ပါ။
နောက်ဆုံး ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်က ဘာစာအုပ်လဲလို့များမေးရင်_
မဖတ်ထားပဲနဲ့ ဖတ်ထားသယောင် လိမ်ညာမပြောပါနဲ့။ ကိုယ်ဖတ်ထားတဲ့ အထဲက မေးနေတဲ့သူလည်းသိလောက်မယ့် ကြော်ကြားတဲ့ စာအုပ်တအုပ် အကြောင်းကို ပြောပါ။စာအုပ်ကို သင့်ထင်မြင်ချက်လည်း ပြောပြပါ။
ဖိအားတွေအောက်မှာကော ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်လားလို့ မေးခံရရင်_
(ဒီမေးခွန်းက တော်တော်များများ မေးခံရတတ်ပါတယ်)
ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ပဲပြောပြီး ငြိမ်နေတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
လုပ်နိုင်ပါတယ်ဖြေပြီးရင် ကိုယ်တကယ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အကြောင်းအရာ တခုအကြောင်းကို ဆက်စပ်ပြီးပြောပြပါ။
မင်းဘယ်သူ့ကို လေးစားသလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် မင်းရဲ့သူရဲကောင်းက ဘယ်သူလဲလို့များအမေးခံရရင်_
မထင်မှတ်တာ မေးခံရတာအတွက် ထိုင်စဉ်းစား အကြပ်ရိုက်တဲ့ ပုံစံမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဒီလို မထင်မှတ်တာတွေကို မေးနိုင်တာတွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် စဉ်းစားထားပါ။
ကိုယ်လေးစားတဲ့ တယောက်ယောက်ကို ဘာ့ကြောင့် သူ့ကို လေးစား အတုယူ ရတယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ကိုလေးစားမှုက ကိုယ့်အလုပ်ထဲမှာ ဘယ်လိုလုပ်ဘို့ အားဖြစ်စေတယ်၊ ဘာတွေလုပ်ဘို့ ဆုံးဖြတ်လုပ်နေတယ် ဆိုတာမျိုးနဲ့ ဆက်စပ်ပြောပါ။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတခု ထောင်ဘို့စဉ်းစားမိလား ဆိုတာမျိုးမေးရင်_
တနေ့မှာ ကိုယ်လုပ်ငန်း ကိုယ်ထောင်ပြီးကိုယ်သာကိုယ့်ရဲ့လူကြီး ဖြစ်နေမှာမျိုးတွေကို စိတ်ကူးယဉ်မပြောနေပါနဲ့။ သူတို့ လိုချင်တာအဲ့ဒီ အဖြေမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
အခုလျှောက်တဲ့ အလုပ်မျိုးမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘယ်လောက် ပျော်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါက ကိုယ့်ကို ဘယ်လောက် အဓိပါယ်ရှိစေတယ် ဆိုတာရယ်၊ ဘယ်လောက် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတွေရယ်ကို ပြောပြတာမျိုးကို သူတို့က ကြားချင်တာပါ။
တကယ်လို့များ ထီပေါက်ရင် အလုပ်လုပ်ဦးမှာပဲလားလို့ မေးတယ်ဆိုပါစို့ _
ထီပေါက်ရင်တော့ ကမ္ဘာလှည့်မယ်၊ အိမ်ဝယ်၊ ကားဝယ်မယ်၊ ဘာလုပ်မယ် ညာလုပ်မယ်တွေ လျှောက်မပြောပါနဲ့။ တကယ်လား၊ အခုပေါက်တာလား ဘာညာနဲ့ ဟာသနဲနဲ နှောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျက်နှာပြန်တည်ထားပြီး တကယ်သာ ပေါက်ရင်တော့ သိပ်ပျော်စရာ ကောင်းမှာပဲ ဘာညာပြောပြီး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဒီအလုပ်မျိုး လုပ်ရတာက ကိုယ့်ရေရှည် ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးမှာဖြစ်လို့ ဒီအလုပ်မျိုးကိုတော့ ရှာဦးမှာပါပဲဆိုတာမျိုးရိုးရိုးသားသား ပြောရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လည်း ထီမှမပေါက်တာပဲကိုး။
သတိရဘို့က အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ သူက သူမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို သင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ဘယ်လောက် တုန့်ပြန်နိုင်တယ်နဲ့ သူ့မျက်နှာကို အေးအေးဆေးဆေးကြည့်ပြီး ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ကိုသာစိတ်ဝင်စားတာပါ။ ဒီအချက်ကို မမေ့ဘို့လိုပါတယ်။
ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုက ကိုယ့်ကို အခြေပျက်တာမျိုး အဖြစ်မခံပါနဲ့။
နောက်ပြီး ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီး ပြောနေ၊ အော်ငေါက်နေနေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်
အေးအေးဆေးဆေး ထိမ်းသိမ်းနိုင် တုန့်ပြန်နိုင်နေအောင် လေ့ကျင့်ထားပါ။
ကိုယ့်ကို လှောင်ပြောင် ပျက်ရယ်ပြုနေတာကို သိရင်တောင်မှ အဲ့ဒါကို ရီစရာ သဘောထားပြီး အေးအေးဆေးဆေး ဟာသနားလည်သူတယောက်အနေနဲ့ တုံ့ပြန်ပါ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရမ်းအလေးအနက်ထားပြီး အတင်းခုခံကာကွယ်တာမျိုး မလုပ်မိဘို့သတိပြုပါ။
ဖရိုဖရဲ၊ ပျာရိပျာယာ သွားတာ၊
အရမ်းညှိုးညှိုးနွမ်းနွမ်း ဝတ်စား ဆင်ယင်သွားတာ၊
ဘာမှ သပ်သပ်ယပ်ယပ်မရှိပဲသွားတာတွေကို ရှောင်ရှားပါ။
လုပ်ငန်းခွင်နှင့် မည်သို့မျှ မအပ်စပ်သော ဝတ်စား ဆင်ယင် သွားမှုမျိုးကိုအထူးသတိထား ရှောင်ရှားပါ။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လိုက်ဘက်ညီထွေမည့်အဝတ်အစားများကို အင်တာဗျူးအတွက် ဝတ်စားဆင်ယင်ပါ။
အင်တာဗျူးကို အလွန်အစောကြီး ရောက်သွားတာ၊
အလွန်နောက်ကျမှ ရောက်တာမျိုးကိုလည်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။
အကယ်၍ အရေးပေါ်တခုခုကြောင့် နောက်ကျနေပြီဆိုလျှင် အင်တာဗျူးမည့်နေရာသို့ ကြိုတင်ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားပါ။
သန်းခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းသည့်အမူအရာ ပြသခြင်း၊
အပြင်နှင့် အဝေးတို့သို့ ကြည့်နေတတ်ခြင်း၊
ခါးမတ်မတ် ထားမထိုင်ပဲပြင်းရိငြီးငွေ့စွာ ကိုယ်ကို ဖျော့၍ ထိုင်ခြင်း၊
လက်က အငြိမ်မနေပဲ ဟိုကုပ်သည်ကုပ် လုပ်နေခြင်း၊
ပြုံးရုံထက်မကသောအလွန်အမင်း ရီမောမှု ပြုလုပ်ခြင်း။
ကွမ်း၊ ပီကေ၊ ချိုချဉ်ဝါးနေခြင်း၊ စကားလွှဲခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားပါ။
ဆေးလိပ်စော်နှင့် အခြား ကိုယ်အနံအသက်များ၊ရေမွှေးအနံများ ထွက်နေခြင်းကို မဖြစ်စေရန် အထူးဂရုစိုက်ပါ။
ဖုန်းမည်လာလျှင်ကိုင်ခြင်းတို့က သင့်အား အလွန်အမင်း ဒုက္ခဖြစ်စေမည် ဖြစ်သည်။
အင်တာဗျူးခန်းမဝင်မှီ ဖုန်းကို ပိတ်ထားရန် သတိမမေ့ပါနှင့်။
အင်တာဗျူး အတွင်း အိမ်သာတောင်းတက်ခြင်း၊ အပေ့ါ၊ အလေးသွားရခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားပါ။ (ထိုသို့ဖြစ်လျှင် နှစ်ဘက်စလုံးကို စိတ်ဝင်စားမှု လုံးလုံးပျက်ပြားစေသည်။)
အင်တာဗျူးမဝင်မှီ ကတည်းက အပေါ့အလေး ကိစ္စများကို ရှင်းလင်းထားသင့်သည်။
အင်တာဗျူးတွင် အချိန်ကြာကြာ ယူချင်လည်း ယူနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
အစားစားခြင်းကိုလည်း ရှောင်ရှားပါ။ မည်သည်မျှ မစားပါနှင့်။
ရေချပေးလျှင် သောက်နိုင်သည်။ သို့သော် အကုန်လုံး တခါတည်းသောက်ပစ်ခြင်း မပြုလုပ်ပဲ ဖြေးဖြေးနှင့် နဲနဲစီသာသောက်ပါ။
အင်တာဗျူးအတွင်း ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန် အမူအကျင့်များ။
– လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်သည့်အခါ အလွန်ပျော့ပြောင်းစွာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်လက်ချင်း အားပြိုင်ညှစ်နေသကဲ့သို့သော လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခြင်းမျိုးတို့ကိုရှောင်ရှားပြီး ပုံမှန် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုလုပ်သည့်အနေအထားထက် မပိုမလိုအောင် လုပ်ပါ။
– အင်တာဗျူး လုပ်မည့်သူများ မထိုင်မှီ မိမိကထိုင်ချခြင်းကိုလည်း ရှောင်ရှားပါ။ သူတို့ နေရာယူ ထိုင်ချကြပြီးမှ မိမိထိုင်ပါ။
– လက်ပိုက်ထားခြင်းက ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးအတွက် အကျင့်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လက်ပိုက်တာကို ကျွန်တော်တို လူမျိုးစရိုက်မှာ ရိုသေလေးစားကြောင်း ပြတာလို့ ယူဆပေမယ့် အခြားလူမျိုးတွေစရိုက်မှာ လက်ပိုက်ထားတာဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မောက်မာတာ၊တခြားတဘက်သားကို မတန်မရာ ဆက်ဆံလိုတဲ့ အပြုအမူလို့ ယူဆကြတာလဲရှိပါတယ်။
– အင်တာဗျူး လုပ်မည့်သူများ၏ အမည်များကို မမေ့ပါစေနှင့်။
– အင်တာဗျူးမတိုင်မှီ ထိုအလုပ်နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို လေ့လာထားပါ။ အင်တာဗျူးတွင် ထိုအလုပ်အကြောင်း မကောင်းသည့် အချက်များ ကြားထားတာရှိလဲဟု မေးခံရလျှင် ကိုယ်ကြားထားသည်တို့ကို ပြောပြစရာမလိုပေ။ လိမ်မည့်အစား ပြသနာရှိမည့် အလုပ်တွင် မိမိအလုပ်လျှောက်မည် မဟုတ်ကြောင်းပြော၍ဖြေနိုင်သည်။
– လူအားလုံးကို လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပါ။ သန့်ရှင်းရေး ဖြစ်ဖြစ်၊ အဝင်ကောင်တာကလူပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပါ။ ဟန်လုပ်ဆက်ဆံခြင်းမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါ။ တခါတလေ ထိုသူများ၏ မှတ်ချက်က သင့် အင်တာဗျူးတွင် ဖြေခ့၊ဲ လုပ်ခဲ့တာတွေထက် ရွေးချယ်မည့်သူတွေကို ပို၍ အားကောင်းသော အလေးပေးမှုကို ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။
– အင်တာဗျူးလုပ်မယ့် လူတွေကိုလည်း သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်နေစေအောင် ဆက်ဆံပါ။ စိတ်ထဲစိုးရိမ်ပြီး တင်းကျပ်နေတာ မေးခံရတဲ့သူ တယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အင်တာဗျူး လုပ်တဲ့ သူတွေလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ရင်းနှီးမှု တည်ဆောက်နိုင်မှုက အဲ့ဒါကို ကျော်လွှားနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံ ရင်းနှီးမှုမျိုးကြီး ပြသတာလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အေးအေးဆေးဆေး သက်တောင့်သက်သာ စကားပြောနေရတာမျိုး ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားနိုင်ရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိစေပါတယ်။ သူ့မှာ စိုးရိမ်စိတ်များလေလေ သူနဲ့ဆွေးနွေးရတာ ဒုက္ခရောက်စေလေလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– တခါတရံ ဟာသဖေါက်ရန် ကောင်းပေမယ့် အကြိမ်များများ နောက်ပြောင် နေခြင်းများ မလုပ်နေမိရန်ကိုလည်း သတိပြုပါ။ မိမိအိုးတိုးအန့်တန့်နှင့် စိတ်ဂဏှာမငြိမ် ဖြစ်နေသည်ကို မည်သည့်အခါမျှ မပြပါနှင့်။ မျက်နှာကို အေးအေးဆေးဆေး ထားပါ။ စိတ်ကိုလည်း အေးအေးဆေးဆေးသာ ထိမ်းထားပါ။ အလွန်အမင်း ထိမ်းချုပ်နေထိုင်ရသည့် ပုံစံမပေါက်နေပါစေနှင့်။
– အင်တာဗျူး လုပ်တဲ့အခါမှာ လုပ်မယ့် အလုပ်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားမှုပြပါ။ အလုပ်အကြောင်းကို မေးမြန်းမှုလည်း ပြုလုပ်ပါ။ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံ မေးမြန်းမှုနဲ့ ခံစားခွင့်တွေ မေးမြန်းမှုတွေကို ရှောင်ရှားပါ။ နောက်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှုပြတယ် ဆိုပေမယ့် အလုပ်ကို မရမနေ အသည်းအသန်အရမ်းလိုအပ်နေတဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့ အတင်းကြီး အလုပ်လိုချင်နေတဲ့ပုံမျိုးဘယ်တော့မှ မပြပါနဲ့။
– လခနှင့် ခံစားမှုများအကြောင်းကို မိမိဘက်က စမပြောပါနှင့်။ အလုပ် ကမ်းလှမ်းသည့် အခါတွင်မှ ထိုအချက်များ ညှိနှိုင်း၍ ရသည်။ အလုပ်အကြောင်းကိုသာ အဓိကထားပြောပါ။ အလုပ်အကြောင်းကို လုံးဝ မမေးမြန်း မစူးစမ်းခြင်းနှင့် အလွန်အများကြီး မေးနေခြင်းတို့က သင့်အပေါ် ထင်မြင်မှုကို ထိခိုက် စေနိုင်သည်။
– အင်တာဗျူး လုပ်သည့်သူ၏ စကားများကို ဂရုစိုက် နားထောင်ပါ။ ဂရုစိုက် နားထောင်မှု မရှိက သူ့ကို စိတ်မဝင်စားကြောင်း ပြရာရောက်ပြီး မိမိအတွက်စဉ်းစားတော့မည် မဟုတ်ပါ။ စကား ပြောဆိုသည့်အခါတွင် မျက်နှာကိုကြည့်၍ ပြောဆိုပါ။ မျက်နှာနှင့် မျက်လုံးလွှဲခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။ သို့သော် မျက်လုံးများက အင်တာဗျူး လုပ်သည့်သူအား စိန်ခေါ်သော မျက်လုံး၊မျက်နှာပေးမျိုး မဖြစ်စေဘဲ ရင်းနှီးတည်ကြည်သော မျက်လုံး အမူအရာများသာဖြစ်စေရမည်.
– စကားစကိုဖြတ်၍ မည်သည့်အခါမျှ မပြောပါနှင့်။ စာဖတ်ထား၊ အလွတ်ကျက်ထားသည်များ ပြန်ပြောသကဲ့သို့ ပြောခြင်းများ မဖြစ်အောင် အလွန် သတိထားပါ။
– ကိစ္စရပ် တခုခုကို ဆွေးနွေးသည့်အခါ စိတ်ဆိုးခြင်း၊ မိမိယုံကြည်ထားသော အကြောင်းအရာကို အလွန်အမင်း ခုခံပြောဆိုနေသော ပုံစံပေါက်အောင် ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို လုံးလုံးမလုပ်ပါနှင့်။ အင်တာဗျူးတွင် သင်၏ အမြင်နှင့် ယုံကြည်ချက်များကို စစ်ဆေးနေခြင်း မဟုတ်သည်ကို သတိပြုပါ။
– စောင့်နေရခြင်းကို ညည်းညူခြင်းနှင့် အခြားကိစ္စများကို ညည်းညူခြင်းများကိုရှောင်ရှားပါ။ ညည်းညူတတ်သူဟု ထင်သွားလျှင် သင့်အား အလုပ်ပေးချင်စိတ်လျော့နည်းလာလိမ့်မည်။ မညည်းညူတတ်သူကို ပိုနှစ်သက်လေ့ရှိတတ်ကြသည်။
– အင်တာဗျူးတခုမှာ အချက်အလက်တွေ၊ ပွိုင့်တွေအများကြီး မပြောဖြစ်အောင်သတိထားပါ။ အများကြီး ပြောလေလေ ကိုယ့်ကို သူတို့ မေးစရာ၊ အားနည်းချက် ရှာစရာပိုများများရလေလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချက်အလက်မပြောပဲတော့လည်း နေလို မရပါဘူး။ နဲနဲတော့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံ မများစေအောင် သတိထားရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဒီအလုပ်အတွက် သင်က အသင့်အလျှော်ဆုံး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ လက်ခံလာအောင် ဒီလိုတိုက်ရိုက်မပြောပဲ ဆွေးနွေးပြနိုင်ဘို့ လိုပါသည်။ ဤသို့ လုပ်မှသာ သင့်အားအလုပ်အတွက်ငှားချင်လာပေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
– မေးသည့်သူ မေးခွန်းများကိုတလုံးမေး၊ တလုံးဖြေ လုပ်နေလျှင် သင့်အား မည်သူကမျှ အလုပ်အတွက်သင့်လျှော်သည်ဟု သတ်မှတ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ စကားအလွန်များသည့် ပုံစံမပေါက်စေရန်လည်း အထူးသတိထားပါ။ စကား အလွန်များများ ပြောသည့်သူများကို အင်တာဗျူး လုပ်သူများက သိပ်အထင်ကြီးလေ့ မရှိပေ။ တချိန်လုံး မိမိကပဲ စကားပြောနေသည်မျိုး မဖြစ်အောင် အလွန်သတိထားပါ။
– ပုံမှန် မေးမြန်းတတ်သည်များကို အလွယ်တကူနှင့် မထစ်ပဲ၊ မစဉ်းစားနေပဲ မှန်မှန် ဖြေနိုင်စေရမည်။ ထိုအချက်များတွင်ပင် တွေဝေပြနေလျှင် အထင်သေးခံရတတ်သည်။ စကားကို ဝါကျအပြည့်ပြောပါ။ You know , Umm, I guess, ကျွန်တော် ထင်တာပဲ၊ ဟုတ်မှာပေါ့၊ စသည်ဖြင့် မရေမရာပြောသည်များနှင့် စကားတဝက်တပျက်နှင့် စဉ်းစားနေရသည်တို့ကိုရှောင်ရှားပါ။
– ထင်ရှား အရေးကြီးသည့် သူများကို မည်သူ့ကို သိသည်၊ မည်သူက သူငယ်ချင်း၊စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ကို အထင်ကြီးစေရန် လုပ်ခြင်းများကို ရှောင်ရှားပါ။ ထိုသို့ အခြားသူများ၏ အမည်များကို ထည့်ခြင်းက မိမိကိုယ်ကို အားမကိုးတတ်ပဲ အခြားသူများအား အသုံးပြု၍ မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင်ခြင်းဟု ထင်ခံရနိုင်သည်။
– အရာရာကို သိနေတတ်နေသော ပုံစံမျိုးနှင့် ပြောဆိုခြင်းမျိုးကိုလည်း ရှောင်ရှားရမည်။ စူးစမ်းလိုစိတ်၊ သိရှိအောင် လုပ်လိုစိတ်ကို ပြသတတ်ရမည်။ အလွန်အကျွံတော့ မဖြစ်အောင် အထူးသတိပြုပါ။
– အလုပ်များတွင် လျှောက်ထားသည့် အလုပ်ထက် လိုအပ်ချက် မကိုက်ညီသောသူများနှင့် လျှောက်ထားသော အလုပ်ထက် အလွန်ပိုတတ်နေသူများကို သိပ်ငှားလေ့မရှိကြပေ။ မကိုက်ညီသည့် သူများကို ငှားရမ်းခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်နိုင်သလောက် မထုတ်လုပ်နိုင်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး အလွန်အမင်း ပိုတတ်ကျွမ်းသူကလည်း ထိုလုပ်ငန်းတွင် အတည်တကျ နေမည်မဟုတ်ပဲ ယာယီ ခိုရန်အတွက် လုပ်သည်ကိုသာစိုးရိမ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်အင်တာဗျူးတွင် မိမိ၏ အရည်အချင်းကို လျှောက်ထားသော အလုပ်နှင့် ကိုက်ညီရန် ညှိနှိုင်းပြောဆိုရသည်။လို၍ ပို၍မကောင်းပေ။
– အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ ကိုယ်ဘယ်လောက် ကြိုးစားတယ်ဆိုတာထက် ဘာအောင်မြင်မှုတွေ၊ဘာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ လုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့တယ် ဆိုတာကို အလေးထားဆွေးနွေးပါ။ အရမ်းကြွားသလိုလည်း မဖြစ်အောင် အေးအေးဆေးဆေး ပြောပါ။
– တဘက်သား ပြောတဲ့စကားကိုလည်း ဖြတ်မပြောပဲ သေသေချာချာ နားထောင်ပါ။သူပြောပြီးတဲ့ အချိန်အထိ သေသေချာချာ စောင့်ပြီးမှ ကိုယ်ပြောလိုတာကို ပြောပါ။ အင်တာဗျူး လုပ်တဲ့သူကို စကားဖြတ်ပြောတာက အလွန်ကြီးလေးတဲ့ အမှားလုပ်သလိုပါပဲ။
– အောင်မြင်မှုတွေ၊ လုပ်ခဲ့ပြီးတာတွေကို ဖော်ပြတဲ့ အခါမှာလည်း ကိုယ့်လုပ်ဖော် ကိုင်ဘက်တွေရဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြု ပြတတ်ဘို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပြခြင်းဟာ ကိုယ့်တကိုယ်ကောင်းသမား မဟုတ်ပဲ၊ အများနဲ့ တူတူ တွဲလုပ်တတ်တဲ့ သူဆိုတာကိုအင်တာဗျူး လုပ်တဲ့သူက သိစေလိမ့်မှာ ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်အများစုမှာတယောက်ကောင်း လုပ်တတ်သူထက် အသင်းအဖွဲ့နဲ့ တွဲပြီး အသင်းအဖွဲ့ကိုအားတက်အောင်လုပ်ပြီး လုပ်တတ်တဲ့သူကို ပိုပြီး အလိုရှိလေ့ ရှိပါတယ်။
– အရင်က အလုပ်နှင့် ကိုယ့်အထက်လူကြီးအကြောင်း မကောင်းပြောခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။ ထိုသို့ ပြောလျှင် မေးမြန်းသည့်သူက စိတ်ဝင်တစား မေးမြန်းသည့် ပုံစံပြကောင်းပြမည် ဖြစ်သော်လည်း သူ့နောက်ကွယ်တွင်လည်း မိမိက ထိုသို့ ပြောသောအကျင့် ရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု သတ်မှတ်ကာ မိမိအား အစကတည်းက မယုံတော့ပဲ ငှားရမ်းရန် ဝန်လေး ပေလိမ့်မည်။အလုပ်ရပြီးနောက်ပိုင်း အလွန်ရင်းနှီးလျှင်တောင်မှ ထိုသို့ပြောခြင်းမျိုးကို သတိထားပါ။
– ကိုယ်မလုပ်နိုင်သော အလုပ်နှင့် အရည်အချင်းကို မရှိပဲနှင့် ရှိသည်ဟု မပြောပါနှင့်။ မလုပ်နိုင်ဟုလည်း မပြောပဲ ထိုကိစ္စကတော့ အသစ်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ ကြိုးစားကြည့်ချင်သည်ကို ပြောဆို ဆွေးနွေးပါ။ မလုပ်တတ်၊ မလုပ်နိုင်ပဲနှင့် လုပ်နိုင်သည်ပြောလျှင် အလွန်ကြီးမားသော ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပေသည်။ မိမိလည်း ရေရှည်တွင် စိတ်ညစ်ရပေလိမ့်မည်။
– အလွန်အမင်းကြီး အတင်းတောင်းသည် မဖြစ်စေပဲ အလုပ်ရလျှင်ဖြင့် ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် လုပ်ဆောင်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုရန် မမေ့ပါနှင့်။ တောင်းတောင်းပန်ပန်နှင့် အလွန်အကျူးလိုအပ်နေ၍ တောင်းသည့် ပုံစံလုံးလုံး မဖြစ်စေရပဲ သာမန်ရိုးရိုးပုံစံနှင့် ပြောရမည်။ သို့ရာတွင် သူ့အား ထွက်ပေါက်ပိတ်ပြီး ပြောရန် ခက်သော အခြေအနေမျိုး မဖြစ်စေအောင် ရှောင်ရှားသင့်သည်။
– အင်တာဗျူးပြီးတိုင်း အင်တာဗျူးခေါ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို နားထောင်နေမယ့် အကြောင်း အတိုလေး ရေးပို့ပါ။ အလုပ်ရလား မရလားကို ဒီအထဲမှာ လုံးလုံးမမေးပါနဲ့။
ကျွန်တော်က ဒီအလုပ်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလူ ဖြစ်တယ်။
ဒီလိုဟာမျိုးကို ကာဗာစာမှာ ရေးတာက ပြဿနာ မရှိပေမဲ့ စကားထဲမှာ ပြောရင်တော့ မကောင်းပါ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးနေသည့်လူပုံစံ ပေါက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
စကားပြောသည့် အခါတွင် အရည်အသွေးများကို ကိုက်ညီကြောင်းသာ ဆက်စပ်ပြောဆိုရပြီး ဤစကားမျိုး မည်သည့်အခါမျှ မပြောသင့်ပေ။
တကယ်လို့ ဒီလိုဖြေရင် အလုပ်တော်တော်များများမှာ ပြဿနာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဖြစ်သင့်သော လစာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှု ပြုရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ မိမိအနေဖြင့် ကြိုတင် လေ့လာထားပြီး ထိုက်သင့်သည့် ပမာဏထက် များလည်း မများလွန်း၊နည်းလည်းမနည်းလွန်းသောဈေးနှုန်းကို ပြောဆို ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ နည်းလွန်းပါကလည်း မိမိအရည်အချင်း မပြည့်မှီ၍ လျှော့ဈေးနှင့် ရောင်းသည် ထင်တတ်ကြပြီး များလွန်းပါကလည်း
ငွေနောက်လိုက်လွန်းသည် ထင်တတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကြိုတင် လေ့လာမှု သေသေချာချာ လုပ်ထားလျှင် အကျိုးပိုရှိမည် ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကိုကိုယ် ဘာမှချို့ယွင်းချက်ရှိတယ် မထင်မိဘူး။
လူတိုင်းတွင် ချို့ယွင်းချက် ရှိကြသည်။ မိမိကိုယ်တွင် ချို့ယွင်းချက်ရှိတာကို လူတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သိကြသည်။ အမှန်တကယ်
မသိသော သူများသည် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အလွန် အထင်ကြီးနေတတ်ကြသူများ ဖြစ်တတ်၍ ထိုသူများကို အလုပ်မည်သူမျှ ပေးထားလိုကြလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
မိမိ၏ ချို့ယွင်းချက် အချို့ကို ဖေါ်ပြရန် လိုပေလိမ့်မည်။ အလုပ်ကို မထိခိုက်စေသောချို့ယွင်းချက်မျိုးကို ပြောပြ ဆွေးနွေး၍ မည်သို့သော ပြောင်းလဲမှု ကြိုးစားနေကြောင်း ပြောဆိုခြင်းမျိုးက ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
အားလုံး ဘက်ပေါင်းစုံ၊ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံက ကောင်းနေတာပဲ လိုချင်တယ်။
မည်သည့်အရာမျှ ဘက်ပေါင်းစုံမှ ကောင်းနေလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
အကောင်းဆုံးရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားကာ အများစုကို အင်တိုက် အားတိုက်လုပ်ကြစေရန် တက်တက်ကြွကြွ ဖြစ်လာအောင် တိုက်တွန်း ပြောဆိုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုမျှရသော ရလာဒ်ကိုလည်း ကျေနပ်နိုင်ကြောင်း ဖေါ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
ဘက်ပေါင်းစုံက ကောင်းနေတဲ့ ပုံစံရှိတာပဲ ကြိုက်သည်ဆိုသော သူများကို စစ်မေးသူအများစုက ကြိုက်လေ့မရှိပေ။
ကျွန်တော့်မှာ ဒီအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မေးစရာမေးခွန်း မရှိပါဘူး။
ဒီအလုပ်မှာ အချိန်ပြည့်လုပ်မည့်သူက ဒီအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မဝင်စားဘူးဟု ပြောလိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်နှင့်
ပတ်သက်သော မေးလိုရာများကို ရှာဖွေလေ့လာထား သင့်သည်။ အလွန်အကျွံ မေးကလည်း မကောင်းသည်ကို သတိရသင့်သည်။
Share by -ရေးမိရေးရာလေးများ on Facebook.
ဖတ်တယ် …. မှတ်တယ် …..
Bookmarks လုပ်ထားတယ် ….
တစ်ပုဒ်ထက်တစ်ပုဒ် ပိုကောင်းပြီး ပိုပြီးအကျိုးများစေတဲ့ အချက်အလက်တွေ အပြည့်ပဲ။
အေးဆေးဖတ်ပီး နောက်မှ လာမန့် တော့မယ်နော်…..
အကျိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးမို့ save ထားလိုက်မယ်ဗျာ။
နောင် ဘိုးဘွားရိပ်သာ ၀င်ခွင့်အင်တာဗျုးမှာ အသုံးဝင်ချင်ဝင်မလားလို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာ။
ကျုပ်လဲ လေးခင်ခ အတိုင်း ဆေ့ လုပ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ
မှတ်ကာ သားကာ သွားပါသဗျ။
အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ပြောစရာ မရှိပါဘု
အဲဒီ အင်တာဗျုးအတွင်း ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အမူအကျင့်များ ကို ပုံစံလေး ပြောင်းရင် ကောင်းမဗျ။
အကုန်လုံးကို bold တင်ထားတော့ ဖတ်ရတာ ထပ်သွားပြီး၊ မျက်စိက အတော် အားစိုက် ယူလိုက်ရတယ်။
အရမ်း၊ အရမ်း၊ အရမ်းကို ကျေးဇူးပါ………….လို့
သိကြားမင်း အင်တာဗျူး မေးဖို့က သိပ်မလိုတော့ဘူးလေကွယ်။………………….
ကြည်ဆောင်း – ကျေးဇူး
ချစ်မမ – ကျေးဇူး
တိမ်မည်း – ကျေးဇူး
ကိုခ – ကျေးဇူး
မောင်လေးပေ – ကျေးဇူး
သကြား – ကျေးဇူး (အကြံပေးတဲ့တိုင်း ပြင်လိုက်ပြီ၊ ကျေးဇူး အဂန်း)
အင်တာဗူးမှာ ခြစ်တတ်လားမေးရင် စာလုံးပေါင်း သေချာအောင် အရင်မေးပါ။ ပြီးမှ ဘာလုပ်သင့်တယ် ဆုံးဖြတ်ပါ။ ဆွိလေးတုံးက ဦးကြောင်မေးတာ မဆုံးသေးဘူး ခြစ်ထည့်လိုက်တာ အစင်းရာဂျီး ထင်ကျန်ခဲ့တယ်၊ ဒါနဲ့ ဘယ်ရမလဲ ဒီကလည်း ပျံခြစ်ထည့်လိုက်တာပေါ့.. ရှလွတ်ဆိုပီး…
ခန့်မလား.. မခန့်ဘူးလား… ဆိုတဲ့ပုံစံတော့ သွားမလုပ်ရဲပါဘူး။ ဟီး
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်တာဗျူးခံရပြီဆိုတာနဲ့ အလုပ်ရချင်တာပေါ့နော်….
လစာကလည်းသိပ်မလိုချင်ပါဘူး။ မိသားစု စားနိုင်ရုံလောက်လေးပဲ လိုချင်မိတာပါ…. http://myanmargazette.net/wp-includes/images/smilies/smiling.png
အောင်ကြူး – ထပ် အခြစ်ခံချင်ပြန်ဘီထင်တယ်။
မနောဖြူလေး – ကိုဂီပြောသလိုဆို အင်တာဗျူးက အလုပ်ခန့်မဲ့ သူနဲ့ အလုပ်လျှောက်တဲ့သူကြားက Psychological Contract ဆိုပဲ။ ဆိုတော့ ကိုယ်ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ပြင်ဆင်ပြီး ကျန်တာ သူ့အခြေအနေနဲ့ ကိုယ့် အခြေအနေကို ညှိပြီး အကောင်းဆုံး ဖြေရမှာမျိုးပါဗျ။ ကိုယ်က အရမ်းမာလို့ မရသလို ပျော့လို့ လည်းမရပြန်ဘူးလေ။
ကိုယ်ကတော့ ဆောင်ရန်တွေ မဆောင်မိလို့ထင်တယ်။
စာမေးပွဲတစ်ခု နှစ်ခါပြန်မဖြေဘူးကွဆိုပြီး နောင်မဖြေတော့ဘူး။
ကျနော်လည်း အင်တာဗျူးတွေဖြေတုန်းက ဒါတွေဘာမှမသိ/မဖတ်ခဲ့ရဘူးရယ်။